အလိုအလျောက် လက်စွပ် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား Multi-strနှင့် အကွေ့အကောက်များသော အဘို့ မှန် CT ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ် စက်ရုံ - Jiangshan ဟွာအာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နည်းပညာ Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကွိုင် Winder > အလိုအလျောက် လက်စွပ် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား Multi-strand အကွေ့အကောက်များသော အဘို့ မှန် CT
အလိုအလျောက် လက်စွပ် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား Multi-strand အကွေ့အကောက်များသော အဘို့ မှန် CT
အလိုအလျောက် လက်စွပ် အကွေ့အကောက်များသော စက် Multi-strand အကွေ့အကောက်များသော ဘို့ မှန် CT လုပ်နိုင် လေ အများကြီး ကကြိုး ၏ ဝါယာ မှာ တစ်ခု အချိန်, ရန် သေချာပါတယ် အရှိန်အလွန်မြန်သော ပတ်ပတ်လည် က စနစ် ဘယ်တော့လဲ က မျဉ်းကြောင်း။
မှန် CT အဘို့အလိုအလျောက် Ring ကို Winding စက် Multi-strand Winding
လက်ရှိထရန်စဖော်မာအတွက် HAO-130 အလိုအလျောက်ထရန်စဖော်မာစက်သည်အကွေ့အကောက်များသောကိရိယာအသစ်စက်စက်ဖြစ်ပြီးစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရှိထရန်စဖော်မာ၏လက်စွဲစာအုပ်နည်းပညာတို့အရသိရသည်။ အလိုအလျောက်ထရန်စဖော်မာစက်အကွေ့အကောက်များသောစက်ဒီဇိုင်း၊ မျက်နှာအသွင်အပြင်မြန်၊ တိကျမှန်ကန်သောတင်းမာမှုလိုင်းဘောင်ထိန်းချုပ်မှု၊ အရည်အသွေးသည်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီးစသည်။
၁။ PLC စနစ်တွင်စက်ကိရိယာဝါယာကြိုးသိုလှောင်မှုအလိုအလျောက်တွက်ချက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ရေတွက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ရပ်တန့်ခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်ကိုရပ်တန့်ခြင်းစသဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုများစွာရိုးရှင်းစေသည်။
၂။ အလိုအလျောက်ထရန်စဖော်မာစက်အကွေ့အကောက်များသောစက်၊ ၎င်းသည်နှစ်မျိုးသို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးပေါင်းစုံအလွှာအကွေ့အကောက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၄။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နိမ့်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်ဆူညံသံနည်းခြင်း။
၅။ အလိုအလျောက်ထရန်စဖော်မာအကွေ့အကောက်များသောစက်သည် ၀.၁၁ မီလီမီတာမှစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးမဲ့ညှိနှိုင်းမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။
၆။ ၎င်းကိုသေးငယ်သည့်အစုအဝေး၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကွိုင်များအကွေ့အကောက်များသောနေရာတွင်အထူးအသုံးပြုသည်။
2. မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောစက်ကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိလုပ်သားများပါ ၀ င်သောအလိုအလျောက် Transformer အကွေ့အကောက်များသောစက်များ၊
3. တပ်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်, အစိတ်အပိုင်းများ၏အရည်အသွေး, စက်အသွင်အပြင်စသည်တို့ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
windable electromgnetic ဝါယာကြိုး၏အချင်းအကွာအဝေး
အကွေ့အကောက်များသောကွိုင်၏ min အတွင်းစိတ်
Î¦ ၃၀ မီလီမီတာ
အကွေ့အကောက်များသောကွိုင်၏ Max အပြင်ဘက်အချင်း
Î¦ ၁၃၀ မီလီမီတာ
500 * 800 * 1000mm
hot Tags:: အလိုအလျောက် လက်စွပ် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား Multi-strand အကွေ့အကောက်များသော အဘို့ မှန် CT, တရုတ် ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူ, စက်ရုံ, အမြင့် အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးပေါ်, စျေးနှုန်း, ဈေးနှုန်း စိတ်ကြိုက်
အလိုအလျောက် လက်စွပ် အကွေ့အကောက်များသော စက်Multi-strand အကွေ့အကောက်များသော ဘို့ မှန် CTအလိုအလျောက် လက်စွပ် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား
ကြောက်စိတ် ကွိုင် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား
CNC ကွိုင် အကွေ့အကောက်များသော စက်ယန္တရား
ပြည့်သည် အလိုအလျောက် Epoxy ဗဓေလသစ် APG ဆေးထိုး စက်ယန္တရား Servo နှင့် PLC ထိပါ မျက်နှာပြင် ထိန်းချုပ်မှု
စံ မော်ဒယ် ၏ APG စက်: Epoxy ဗဓေလသစ် ဟိုက်ဒရောလစ် အလိုအလျောက် ဖိအား Gelating စက်ယန္တရား
အများစုမှာ စျေးရောင်း မော်ဒယ် ၏ APG စက်ယန္တရား နှစ်ဆ ဘူတာရုံ Epoxy ဗဓေလသစ် APG ညှပ် စက်ယန္တရား